Singapaoro: Tanàna Sa Firenena? · Global Voices teny Malagasy
Singapaoro: Tanàna Sa Firenena?
Voadika ny 20 Mey 2017 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, bahasa Indonesia, Català, 日本語, Ελληνικά, Português, Français, Deutsch, Esperanto , عربي, Italiano, English
Singapaoro. Lisansa: CC0 Sehatra ho an'ny daholobe
Tanàna ve sa firenena iray i Singapaoro? Toa adaladala ihany io fanontaniana io satria fantatra erantany i Singapaoro amin'ny maha-firenena mahaleotena azy. Saingy ho an'ny Ministry ny Lalàna ao Singapaoro, K. Shanmugam, tokony ho toa ny fitondra tanàna iray no hitondràna an'i Singapaor. Niteraka adihevitra tao amin'ny haino aman-jery sosialy io fanamarihany io.
Tao anatin'ny velakevitra iray nataony tao amin'ny Rantsana Iraisampirenan'ny Fikambanan'ny Mpisolovavam-Panjakana, natao tany New York, nomarihan'i Shanmugam fa betsaka ny olona no manakiana ny fibodoan'ny antoko tokana ny sehatra politika ao Singapaoro satria ampitahain'izy ireo amin'ireo firenena hafa i Singapaoro. nisisihany ny hoe tokony tsaraina ho toy ny tanàna iray i Singapaoro.
“…tsy misy olona manontany raha misy demaokrasia na tsia ao New York…. Ao no be indrindra ny olona manaotao foana. Nandramako ny nanazava hoe hafa isika. Tanàna iray isika fa tsy firenena iray..”
Nampangain'i Cavalierio ho manaraka “lojika miolikolika” ilay minisitry ny lalàna mba hanamarinany ny fitondràna tsy refesimandidy ao Singapaoro:
Ary ankehitriny, ho an'ireo ezaka sy sorona rehetra napetratsika ho amin'ny fanorenana ampaham-pirenena kely iray, dia lazaina fa tsy firenena velively isika. Toa kivalavala ny fanenony ; naneno ho toy ny fanodinkodinana andraikitra, toy ny fialàna adidy.
Singapaoro, raha tsy ianao no fireneko, dia iza?
Tsy dia ambony loatra ny antony ho an'i Shanmugam: nilaza izy fa ny rafitra poliika ao Singapaoro dia tsy tokony horefesina mifanaraka amin'ny an’ “ireo firenena mahazatra”, izay mety hiovaova ny fijerena an'i Singapaoro ho toy ny tsy manaja demaokrasia. Ho solon'izay, nolazainy fa Singapaoro dia tokony ho ampitahaina amin'ireo “tanàna” toa an'i Chicago, San Fransisco, sy tanànan'i New York – tanàna iray manaraka ny fifehezan'antoko tokana Tanàna demaokratika.
Indraindray rehefa tratrantsika ny faratampony amin'ilay olana, hitantsika fa ny teo ihany no teo. Ireo mpifehy tranainy tsy refesimandody milaza ho demaokraty, manolankolana ny lojika hifanaraka amin'ny fahefany.
Araka izany, ny niafaràny, ny valinteny naroson'i Shanmugam ho an'ireo Amerikana nihaino azy tamin'ny herinandro, momba ny gazetintsika, ny rafi-pitsaràna, ny rafitra politika, dia tsy tena valinteny velively. Valinteny sahaza nohazavaina lavitry ny fanafenana ireo valinteny am-pahendrena.
Tian'i Rachel Zeng i Shanmugam mba hamelabelatra ny fomba fijeriny satria tsy takany mihitsy ilay fomba fisainana.
Ho ahy manokana, somary sarotra ihany ny hitelina an'izany. Raha tsy firenena fa tanàna iray i Singapaoro, dia ampahanà tanàna ao anatin'ny firenena iza izany ny tanànantsika….
Eny ary, tsy azoko ilay izy. Tena mba ankasitrahako raha toa i K Shanmugam malalantsika hanazava am-pitiavana amintsika eto, satria karamaina vola be ranamana mba handray anjara amin'ny fitantànana ny tanànan'i Singapaoro.
Raha naneho hevitra tamin'ilay lahatsoratra am-bilaogy, nitondra fanazavàna i Anon hoe ireo mpanakiana dia voalohany indrindra tokony hamaky ny fitànana an-tsoratra feno avy amin'ilay lahatenin'i Shanmugam mba hanombànany izay antony nilazàny an'i Singapaoro ho tanàna fa tsy firenena.
Vakio ilay fitànana an-tsoratra. Rehefa niresaka ny maha-‘tanàna’ an'i Singapaoro izy fa tsy ‘firenena’ dia nanazava ny antony mampitsingilahila ireo fifidianana atao ao Singapaoro, na eo aza ny hoe malalaka sy tsy mitanila ny fifidianana aty amintsika. Nampitahainy amin'ireo tanàna any Etazonia i Singapaoro, sy ny hoe firifiry irao tanàna any Etazonia no manana fifidianana anjakan'antoko tokana efa ho am-polo taona maro.
Rehefa niteny izy fa “tsy firenena iray” i Singapaoro, azo antoka fa tsy tena izay no tiany anambaràna azy!
Diso fanantenana i Clement Tan hoe i Shanmugam, mpitarika iray avy amin'ny andian-taranaka vaovao, no handeha hanome tohankevitra miteraka fanoherana be tahaka io :
Tena misaritaka ny saiko noho ny zavatra nolazain'ny minisitry ny lalàna eto Singapaoro… Farafaharatsiny miaraka amin'i Lee Kuan Yew sy ireo mpikambana avy amin'ireo zokiolona mitahiry ny fahiny, fantatro fa azoko atao ny miandrandra avy amin'izy ireo – resaka iray hafa ny hoe mitovy hevitra amin-dry zareo aho na tsia. Saingy miaraka amin'i K. Shanmugan, ampahany amin'ny andian-taranaka vaovaon'ireo mpitarika politika ao Singapaoro, tsy azoko antoka akory aza raha tena inoany, iraiketany ary fantany izay arovany.
Norasarasain'ny The Temasek Review ireo fialan'olon-kendry tao anaty tohakevitr'i Shanmugam’
“Hadisoana tsy nahy” ve no vitan'ing. Shanmugam sa frediana (freudian) ? Raha TSY firenena iray i Singapaoro, dia mbola horaisina ho fanjakana iray manana fiandrianana sy mahaleotena ve isika? Araka izany dia tanàna iza no manana ny fiandrianan'i Singapaoro?
Tokana i Singapaoro raha raisina amin'ny hoe sady tanàna no firenena iray izy.
Amin'ny maha-minisitra manana ny lanjany azy ao amin'ny kabinetra ao Singapaoro, lanja mavesatra tokoa no nentin'ìireo tenin'ing. Shanmugam.
Nahoana ireo vatan-dehilhy ao Singapaoro no manao raharaha miaramila ao anatin'ny tafika raha tanàna iray no arovany fa tsy ny firenen'izy ireo? Any amin'iza no manao tatitra ny Praiministra eto amintsika? Inona no lanja ananan'ny Karapanondro mavokelintsika? Olompirenen'ny firenena iray ve isika sa mponin'ny tanàna iray?
“Eny” hoy ny The Journey of a Decade, tanàna iray ary efa izany hatrizay i Singapaoro :
Aza milaza ny lazaiko hoe.. Ity fehezanteny ity dia toa nahatezitra Singapaoriana maromaro…Aleo vantanina ny resaka….tsy misy olona miteny na inona na inona momba ny maha-firenena iray an'i Singapaoro. Tanàna iray foana no nonenantsika hatramin'izay.
Fanjakana tanàna anaty nosy iray foana isika hatrizay. Tsy takatro ny hoe impiry aho no mandre zavatra toy ny fiarovana ilay firenena ankoatry ny zavatra hafa…Tsy dia marina loatra izany. Tokony ho ilay tanàna no arovana.